Pearl Hill Townhouse @ Tanjung Bungah - I-Airbnb
Tanjung Bungah, Pulau Pinang, i-Malaysia
I-i-townhouse ephelele ibungazwe ngu-Phyllis
Ibekwe maqondana nolwandle futhi phezu kwegquma, le ndawo yokuhlala ilungele abaya olwandle njengoba i-Batu Feringghi (ibhishi elidume kakhulu e-Penang) iqhele ngamaminithi angu-15 kuphela ukusuka lapho. Amanye amabhishi aseduze iTanjung Bungah neTeluk Bahang. Ukufinyelela kalula ezindaweni ezikhangayo ezifana nePenang Toy Museum, iTanjung Bungah Floating Mosque, Penang Butterfly Farm, kanye nepaki yetimu ye-ESCAPE. Imizuzu engama-20 ukuya eGeorge Town kanye nemizuzu engama-33 ukuya ePenang International Airport.
Uyathanda ukuvuka ubukele indawo eluhlaza? Uma ufuna ukuzwa ukuhlala phakathi kwezihlahla, kodwa endaweni yesimanje nenethezekile, le ndlu yedolobha iyindawo yakho. Alibheke ihlathi, futhi uma unenhlanhla, ungase ubone ngezikhathi ezithile izinkawu zasendle zishwiba zisuka esihlahleni ziye kwesinye!
Indawo inamasu amabhishi, izindawo ezikhangayo okufanele uzivakashele, izindawo zokudlela, kanye nemali yokugibela yasendaweni esendaweni ekude. Ilungele ukuhamba ngempelasonto emfushane noma iholide eliphumulele nomndeni noma abangani, elizungezwe imvelo.
I-townhouse yakhelwe endaweni enokuthula nethule phezu kwegquma. Izinga lokushisa lingase lipholile ekuseni kakhulu, ngakho-ke lilungele ukugijima njengoba zingekho izimoto eziningi endaweni futhi. Enelisa ulwanga lwakho ngezinhlobonhlobo zokudla ongazikhetha, okungukuthi kwasendaweni, isiJalimane, isi-Arabhu, ukudla okusheshayo, konke nje ukuhamba ngemizuzu emi-5.
Nothing excites me more than immersing myself in a foreign place, experiencing its culture and exchanging conversations with the locals. You can follow my travel adventures on (Hidden by Airbnb) : @pforphyllis
Ngeke ngitholakale ukuhlangana nawe njengoba ngihlala e-Kuala Lumpur, kodwa qiniseka ukuthi umnakekeli wami uzoqinisekisa ukungena nokuphuma okushelelayo kwenqubo. Ngazise kusenesikhathi uma udinga ukungena ngaphambi kwesikhathi/kwephuzile noma uphume. Imininingwane yokuxhumana nomnakekeli wami kanye nolwazi oludingekayo luzonikezwa ngemva kokuqinisekisa ukubhukha.
Ngeke ngitholakale ukuhlangana nawe njengoba ngihlala e-Kuala Lumpur, kodwa qiniseka ukuthi umnakekeli wami uzoqinisekisa ukungena nokuphuma okushelelayo kwenqubo. Ngazise kusenesi…
Izilimi: 中文 (简体), English, 日本語, Melayu
Hlola ezinye izinketho ezise- Tanjung Bungah namaphethelo